Tifatiraha Sawirka ee Soomaaliya
5-tiisa Tifatirayaasha Sawirka ugu fiican ee iPhone
Tifatiraha Sawirka waa barnaamij bilaash ah oo tafatirka sawirada khadka tooska ah. Si dhakhso leh ayaad wax uga beddeli kartaa oo ula wadaagi kartaa sawirradaada qoyskaaga iyo asxaabtaada adoo adeegsanaya kombuyutarkaaga ama casrigaaga. Picasa waa barnaamij furan oo furan oo laga soo dejisan karo. Waad wadaagi kartaa sawiradaada adoo adeegsanaya emayl, aalado fariin sida Facebook iyo twitter. Tifatiraha Sawirku waa aalad fudud oo awood u leh tafatirka sawir qaadashada websaydhka.
Picasa waa barnaamij Furan oo web-ku saleysan oo tafatirka sawir ah oo kaa caawinaya inaad si fudud oo dhaqso leh u tafatirto sawirada. Picasa waa bilaash, Mashruuc Furan oo ay soo saartay Google. Waa xal bilaash ah daabacaadda, daabacaadda iyo tafatirka sawirrada dhijitaalka ah. Picasa waxay bixisaa astaamo horumarsan oo ay ka mid yihiin retouch, filtarrada, iyo looxyada taas oo ka dhigaysa xulashada ugu fiican ee daabacaadda sawirada khadka tooska ah.
Tifatiraha Sawirku waa tifaftire sawir-qaade bilaash ah oo khadka tooska ah oo kuu oggolaanaya inaad sameysid noocyo kala duwan oo yar-yar iyo weyn oo ku habboon sawirradaada. Tifatiraha Sawirka waxaad ku sameyn kartaa howlaha tafatirka sawirka aasaasiga ah iyo waliba howlo badan isku mar. Qaybta ugu fiican ayaa ah inaad qaadan karto wax ka beddelka inta aad rabto intaad ku keydinaysid sawirkaaga.
Collage maker: Abuur koolajyo shaqsiyadeed si fudud adoo adeegsanaya tifaftiraha khadka tooska ah. Si fudud u dooro kumanaan naqshadood, ku dar sawirada, qoraalka, iyo sawirada si aad u abuurto iskudhafyo gaar ah. Kani waa xalka ugu fiican ee khadka tooska ah ee loogu talagalay sameynta sawir-gacmeedyo gaar ah. Waxaa jira qalab loo heli karo bilowgayaasha iyo xirfadleyda.
Tifatiraha Sawirka Rinjiga: Abuur tafatir fiiqan, midab leh, iyo mid adag. Interface-keeda dareenka ayaa sahlaya in la sameeyo hawlo badan oo tafatir sawir ah. Tifatiraha sawirka 'Paintbrush' ayaa baaraya soona dejinaya sawirada. Waxaad isticmaali kartaa xoojinta iyo miirayaasha kala duwan si aad u abuurto sawirro gaar ah oo hal abuur leh. Waad beddeli kartaa midabka iyo ka-soo horjeedka lakabyada sawirka.
Snapsee: Ku abuur sawirro qurux badan oo hal abuur leh Snapsee taleefankaaga iPhone-ka. Waa aalad ugu fiican iPhone tafatirka sawir kuu oggolaanaysa inaad qabato hawlo badan oo fudayd. Waxay leedahay dhowr qalab oo loogu talagalay wax ku darista, tafatirka, iyo ku shaqeysiga sawiradaada. Waad la wadaagi kartaa sawirradaada qoyskaaga iyo asxaabtaada si dadaal la'aan adigoo adeegsanaya barnaamijkan cajiibka ah.
Corel: Tifatiraha sawirka ugu fiican ee iPhone-gaaga waxaa ka mid ah astaamo ay ka mid yihiin tafatirka aasaasiga ah, abuurka, dib u habeynta, iyo hoos-madow. Waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa sawirada asxaabtaada adoo ka soo dagsan kara sawirada Photostream ama i PhotoPaint. Barnaamijkani wuxuu taageeraa noocyada ugu badan ee kamaradaha dhijitaalka ah oo ay ku jiraan aaladaha sawir qaadista ee PDA, kaamirooyinka dhijitaalka ah, PC-yada jeebka, iyo Apple iPhone. Waxay taageertaa noocyada badankood ee qaababka faylka guud sida JPEG, PNG, TIFF, BMP, iyo EXIF. Corel sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dhoofiso qoraalka feylasha adoo u beddelaya dukumiintiyada ereyga qaab PDF ah.
Camera5: Tani waa tifaftire kale oo sawir qaade iPhone ah oo kuu oggolaanaya inaad tafatirto oo aad wax ka qabato sawirradaada qaabab kala duwan. Waxay taageertaa noocyada ugu badan ee qaababka kamaradda dhijitaalka ah oo ay ku jiraan PICT, PMED, TIFF, BMP, GIF, iyo EXIF. Waxa kale oo ay taageertaa dhowr nooc oo muuqaal ah oo horumarsan oo ay ku jiraan TIFF, PNG, iyo JPEG.
Corel Reflixer: Waa mid ka mid ah tifaftirayaasha sawirada iPhone ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee laga heli karo suuqa. Waxaa ku jira dhowr astaamo horumarsan oo ay ku jiraan taabashada-xasaasiyadeed ee sixitaanka saxda ah iyo abuurka. Waxay samayn kartaa labadaba beddelaad iyo tafatirka sawirada dhijitaalka ah. Barnaamijkan bilaashka ah waxaa lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish.
Tifatiraha Sawirka PCVITA: PCVITA waa aalad awood u leh una adeegsiga saaxiibtinimada sawir qaadista iyo softiweerka kumbuyuutarrada Windows-ku-saleysan. PCVITA, waxaad si fudud ugu dari kartaa, wax uga beddeli kartaa, iskuna dari kartaa sawirro badan ama sawirro badan. PCVITA, xitaa waad ku sameyn kartaa tafatirka iyo daabacaadda qad la'aanta. Waad ku dari kartaa, wax ka beddeli kartaa, oo aad ku wadaagi kartaa sawirrada khadka tooska ah ee internetka, miiskaaga, taleefannada casriga ah, ama aaladda la qaadan karo.
CorelDraw: Tani waa tifaftire kale oo abaalmarin ku guuleystay. Waxay bixisaa qalab loogu talagalay tafatirka aasaasiga ah iyo midka adag. CorelDraw waxaa ku jira taageerada qaababka sawirada kala duwan oo ay ka mid yihiin Tile, GIF, PICT, iyo BMP.
IPICY Software International (IPICY): Kani waa barnaamij abaalmarin ku guuleysta oo iskutallaab u ah barnaamijka tafatirka internetka iyo barnaamijka daabacaadda internetka. Waxay awood kuu siineysaa inaad si fudud u hagaajiso oo aad dib ugu dhigto sawirrada. Muuqaalka ugu fiican ee iPICY ayaa ah inay taageerto qaababka muuqaalka dhijitaalka ah ee sida ballaaran loo adeegsado sida TIFF, JPEG, PNG, iyo PVRT. Noocyada 'iPICY' waxaa ka mid ah cabbirka otomaatiga ah, tafatirka muuqaalka, isku-darka iyo is-dul-qaadka, iyo yareynta indhaha oo casaan ah.